Nhau dzeBhaibheri: Kurarama Kwatingaita Narini - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Central) Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEstonia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen (Cyrillic) Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Ukrainian Umbundu Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ungaziva here icho kasikana neshamwari dzako vari kurava? Hungu, ibhuku rino rimene rauri kurava-Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri. Uye vari kurava nhau imene yauri kurava -"Kurarama Kwatingaita Narini."
Unoziva chavari kudzidza here? Kutanga, kuti tinodikanirwa kuziva pamsoro paJehovha noMwanakomana wake Jesu kana tichizorarama nokusingaperi. Bhaibheri rinoti: 'Iyi ndiyo nzira yokurarama nokusingaperi. Dzidza pamsoro paMwari wechokwadi bedzi, noMwanakomana waakatuma kupasi, Jesu Kristu.'
Tingadzidza seiko pamsoro paJehovha Mwari noMwanakomana wake Jesu? Nzira imwe ndeyokurava Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri kubvira kumavambo kusvikira kumugumo. Rinozivisa zvizhinji pamsoro paJehovha naJesu, anditi? Uye rinozivisa zvizhinji pamsoro pezvinhu zvavakaita nezvinhu zvavachaita. Asi tinoda kuita zvinopfuura kurava bedzi bhuku iri.
Unoona rimwe bhuku riri pahuriri here? IBhaibheri. Ko mumwe munhu akambokuravira mativi anobva muBhaibheri akavakirwa nhau dzebhuku rino paari here? Bhaibheri rinotipa mashoko azere atinoda kuti tose tigobatira Jehovha nenzira yakarurama ndokuwana upenyu husingaperi. Nokudaro tinofanira kuita tsika yokugarofunda Bhaibheri.
Asika kungodzidza bedzi nezvaJehovha Mwari naJesu Kristu hakuna kukwana. Tingava nezivo yakawanda kwazvo pamsoro pavo nedzidziso dzavo, asi tisingazowani upenyu husingaperi. Unoziva here kuti chiizve chimwe chinodikanwa?
Tinodikanirwawo kurarama mukuwirirana nezvinhu zvatinodzidza. Unoyeuka Judhasi Iskarioti here? Aiva mumwe wavane 12 vakasarudzwa naJesu kuva vaapostora vake. Judhasi aiva nezivo yakawanda pamsoro paJehovha naJesu. Asika chii chakaitika kwaari? Pashure pechinguvana akava anoudyire, akachera Jesu kuna vavengi vake nokuda kwezvimedu zvesirivha 30. Saka Judhasi haazogamuchiri upenyu husingaperi.
Unoyeuka Gehazi, munhu watakadzidza nezvake muNhau 69 here? Aida kuva nezvimwe zvipfeko nemari zvisaiva zvake. Saka akareva nhema kuti agowana zvinhu izvi. Asi Jehovha akamuranga. Uye achatirangawo kana tisingatereri mitemo yake.
Asi kuna vanhu vazhinji vakanaka vaigarobatira Jehovha nokutendeka. Tinoda kuva saivo, hatidi here? Samueri muduku muenzaniso wakanaka wokutevedzera. Yeuka, sezvatakaona muNhau 55, aingova namakore 4 kana 5 paakatanga kubatira Jehovha mutabernakeri yake. Saka hakunei nokuti uri muduku sei, hauziri muduku zvokusagona kubatira Jehovha. Chokwadi munhu watinoda kutevedzera tose ndiJesu Kristu.
Kunyange paaiveri kakomana, sezvinoratidzwa muNhau 87, aivamo mutembere achitaura navamwe nezvaBaba vake vokudenga. Ngatitevedzerei muenzaniso wake. Ngatiudzei vanhu vazhinji savangabvira nezvaMwari wedu anoshamisa Jehovha noMwanakomana wake, Jesu Kristu. Kana tikaita zvinhu izvi, ipapo tichakwanisa kurarama nariini muparadhiso itsva yaMwari pasi pano.
Johane 17:3; Pisarema 145:1-21.
Tinofanira kuzivei kana tichizorarama nokusingaperi?
Tingadzidza sei nezvaJehovha Mwari naJesu, sezvinoratidzwa nekasikana neshamwari dzako mumufananidzo uyu?
Nderipi rimwe bhuku raunoona mumufananidzo, uye nei tichifanira kugara tichiriverenga?
Kunze kwokudzidza nezvaJehovha naJesu, chiizve chimwe chinodiwa kuti tiwane upenyu husingaperi?
Tinodzidzei muNhau 69?
Muenzaniso wakanaka waSamueri muduku uri muNhau 55 unoratidzei?
Tingatevera sei muenzaniso waJesu Kristu, uye kana tikadaro, tichange tichikwanisa kuitei munguva yemberi?
Verenga Johane 17:3.
Magwaro anoratidza sei kuti kuwana zivo yaJehovha Mwari naJesu Kristu kunoreva zvinopfuura kungoziva nomusoro chokwadi? (Mat. 7:21; Jak. 2:18-20; 1 Joh. 2:17)
Verenga Pisarema 145:1-21.
Ndezvipi zvimwe zvezvikonzero zvakawanda zvatinazvo zvokurumbidza Jehovha? (Pis. 145:8-11; Zvak. 4:11)
Jehovha “une mwoyo wakanaka kuna vose” sei, uye izvi zvinofanira kuramba zvichitiswededza kwaari sei? (Pis. 145:9; Mat. 5:43-45)
Kana tichida Jehovha nemwoyo yedu, tichakurudzirwa kuitei? (Pis. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)
Nzira Nechokwadi Neupenyu
Dzidziso nezviito zvaJesu zvinotaurwa muEvhangeri, zvinogona kuchinja upenyu hwako.
Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei? (Chikamu 1)
Aida kuti zvinhu zviite sezvazviri iye zvino here?